Gore rapera muna Gumiguru, Infinix yakatanga iyo Infinix Hot 10 smartphone muIndia. Gore rino, kambani yakazivisa mashoma mashoma Hot 10 akateedzana mamodheru senge Kupisa 10 Tamba uye Kupisa 10S Munyika. Rutsva ruzivo rwunoratidza kuti kambani iri kugadzirira kutanga iyo Hot 11S munaGunyana. Pamberi pekutanga, mitengo yematanho ayo maviri yave kuita kutenderera pasocial platforms.
Izvo zvinofungidzirwa kuti iyo Hot 11S ichave ichiwanikwa mune mbiri sarudzo senge 4 GB RAM + 64 GB yekuchengetedza uye 6 GB RAM + 64 GB yekuchengetedza. Aya mamodheru anonzi ari mutengo paRs 9,999 (~ $ 136) uye maRs 10,999 (~ $ 149), zvichiteerana.
Infinix Inopisa 10S / Inopisa 10S NFC
Vaverengi vanorayirwa kuti vazeye kudonha kwemitengo nezviyo zvemunyu. Iyo kambani yakatobvumikisa kuti iyo smartphone ichauya yakashongedzerwa neiyo Helio G88, iyo zvakare inokonzeresa ichangobva kufumurwa Redmi 10 nhare. Yakaratidzawo kuti foni ichavhura pakati paGunyana. Zvichida kuti kambani ichatanga kuseka kusvika kweHot 11S kutanga kwaGunyana.
Zvimwe zvinotsanangurwa zveHot 11S hazvisati zvichasimbiswa. Zvichida kuti ruoko runogona kugara nhaka mamwe emaficha kubva kuHot 10S. Nekudaro, Infinix inogona kupa 90Hz yekuvandudza chiyero chinoratidza pane Hot 11S. Inogona kuuya neyakavandudzwa 48-megapixel katatu kamera system. Iyo inogona kugara nhaka ye6,000mAh bhatiri uye 18W inokurumidza kuchaja rutsigiro kubva kuHot 10S.
Infinix Hot S3 the next Xiaomi Redmi Zita 4? Kutanga flash kutengeswa kwemashure kwe120 seconds uye apa ndezvenhau inotevera yekutengesa
Redmi Note 11 Pro 5G+ vs 11 Pro 5G vs Note 11 Pro vs Cherechedzo 11S 5G vs Cherechedzo 11S vs Cherechedzo 11: Chii chakasiyana?
Infinix Hot 10 vs Micromax Mucherechedzo 1 - Magadzirirwo Akaenzaniswa, Mutengo muIndia, uye Zvimiro
Bhajeti-inoshamwaridzika INBook X1 laptop yakaziviswa kuEjipitori, Indonesia, neNigeria
Infinix inotanga kudhura Hot 12i, inoseka dzimwe nhengo mbiri dzakatevedzana
Infinix Cherechedzo 10 Pro yakaburitswa inopa inoratidza yakakura skrini uye mashanu makamera